जुरौनी, जुरौनी, चिसापानी, धानखोला जोड्ने जुन कृषि सडक र खानेपानीलाई प्राथामिकता ! « Tulsipur Khabar
जुरौनी, जुरौनी, चिसापानी, धानखोला जोड्ने जुन कृषि सडक र खानेपानीलाई प्राथामिकता !
स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वार्चित भएर आएको करिब तिनवर्ष पुरा भएको छ । अहिले कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी सुरु भएदेखि स्थानिय तहका जनप्रनिधिहरुले विकासका कामलाई कसरी तिब्रता दिएका छन् । यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । यही विषयमा आधारित रहेर देउखुरीबाट तुलसीपुरखबरकर्मी शिवु खनाललले गढवा गाउँपालिका वडान नम्बर १ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्त बाबुराम अधिकारीसंग गरिएको कुराकानी सारसंक्षेप…
१, आज भोली के काममा व्यस्थ हुनुहुन्छ ?
अव आज भोली नयाँ आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ सुरु भएको छ । विशेष गरिकिन अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम छ र विहानको खानापछि वडा कार्यालयमा पुगेर स्वास्थ्य मापडण्ड अपनाएर जनताहरुको कामकाज गर्नेदेखि लिएर वडलाबासीलाई मुस्कान सहितको सेवा दिनुका साथै पालिकामा नयाँ बजेटको कार्य योजनाहरुको बनाउनमा व्यवस्थ छु ।
२, वितेको तिन वर्षको अन्तरालमा वडामा देखिने लायक यहाँले गरेको विकास केके छन्, भन्दिनुस्न ?
तिन वर्षको कार्यकाल अवधिमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ कालाकाटेमा देखिन लायतका थुप्रै कामहरु रहेका छन् । जस्तै भौतिक पूर्वधार अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, सिँचाइ, सञ्चार लगायतका कामहरुमा थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् ।
३, शिक्षा क्षेत्रमा
हामी निर्वाचित भएर वडामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि कालाकाटे विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कम्पाउण्ड लगाइयो । हामी आउनु भन्दा अगाडि कमपाउण्ड थिएन । सव ओभार्सियरको पठनपाठनको लागी भर्ना धमाधम खुलिरहेको छ । त्यसैगरी रंसिंह आधारभुत विद्यालयमा तराई मधेस कार्यक्रम अन्तरगत संघिय सांसद मेटमणी चौधरीले पठाएको ३५ लाख रुपैयाँको भवन निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यालय वरपर रंसिह खोलाले कटान गरेको क्षेत्रमा राष्ट्रिपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट ७५ लाख बजेट ल्याइकिन विद्यालय व्यवस्थापन गर्न तटबन्ध गरिएको छ । त्यसैगरी वनघुस्री विद्यालय, पडाहरा लगाउत अन्य सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण भैसकेको छ । यसैगरी अव हामी शिक्षा क्षेत्रमा अझै दिर्घकाली योजना बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ ।
४, स्वास्थ्य क्षेत्रमा
हिजो गोबरडिहा स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर १मा परेपनि पूर्व क्षेत्रका अधिकाश नागरिकहरुले उक्त स्वास्थ्य चौकीमा जान धेर्रै समय खर्चिनुपर्ने र अलि उल्टो जस्तो हुने भएको हुनाले आम्दा नेपाल संस्थाको सहयोगमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माण भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा । त्यसैगरी गोबरडिहा स्वास्थ्य चौकीकमा हिजोका दिनहरुमा उक्त स्वास्थ्य चौकीको जनशक्ती कम थियो । एउटा सुत्केरी गराउन सक्ने भौतिक पूर्वाधार थिएन । वडाका नागरिकलाई एउटा सामान्य प्रेसर नाप्नुपर्ने, बच्च तौल गर्नुपर्ने लगाएत विविधका सेवाहरु लिन धेर्रै असहज थियो तर हामी निर्वार्चित भएर स्थानिय तहमा आईसकेपछि शान्त वातावरणमा सहज रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउनुपर्ने स्थानिय नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा लिइ राख्नु भएको छ । हामी आइसकेपछि पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरै राम्रो स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराएका छाँै हामीले ।
५, खानेपानी क्षेत्रमा
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पहिलो काम सम्पन्न भएकै खानेपानी हो । यस वडामा चौधवटा टोलहरु रहेको छन् । चौधवटा टोलमा कबिर दशवटा टोलमा खानेपानीको काम अन्तिर अवस्थामा पुगेको छ । अझ भन्नु हुन्छ भने केही एकदुई वटा टोलले त खानेपानी खाइसक्यो । म चुनावमा उठ्ने बेलामा पनि मेरो नामा भनेकै एक घर एक धारा हो, हैन । मेरो घोषणपत्रमा त्यो नारा उल्लेख छ । त्यस अनुसार अहिले खानेपानीको काम निकै अन्तिर चरणमा छ । त्यसका यो तिनवर्षको कार्यकालमा सबै भन्दा ठूलो फट्को मारेको भनेको खानेपानीमा हो । कमसेकम प्रत्येक घरकार जनतालाई शुद्ध खानेपानी खुवाउन पाइयो भने मेरो चुनावी नारा अभियान पनि पुरा हुने र जनताले पनि शुद्ध खानेपानी खान पाउने भए । त्यसका लागी हामी प्रत्येक टोलमा डिप बोर्रिङ् र खानेपानीको ओभरहेड टंकी बनाएर खानेपानीको प्रणालीलाई अगाडि बढाइ रहेका छाँै । यसका लागी संघिय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यकता अनुसार बजेटहरु माग गर्ने र हाम्रो पालिकाबाट बजेट पनि हालेकै छाँै ।
६, विद्युत् क्षेत्रमा
हाम्रो दाङ जिल्लाकै पूर्वीबेल्टमा पर्ने विकट क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार भएतापनि आउने भोल्टेजहरु अत्याधिक कम हुने । अझ त्यसमा पनि वडा नम्बर १मा धेरै भन्दा धेरै उद्योग व्यवसायीहरु यहा प्रसस्त छन् । जस्ले गर्दा धानखोलामा र कालाकाटे बजार क्षेत्रमा होटलहरु छन् । ति होटलका फ्रिज नचल्ने, पंखा नचल्ने, बत्ती पनि डिम बल्ने, मोटरहरु नचल्दिने समस्याहरु धेरै थिए त्यसका लागी थ्रिपेच लाइनको विस्तार गर्ने र ट्रान्र्फमको क्षमता बढाउने भनेर सुरुवाती वर्षदेखि विद्युत् विस्तार गर्ने, त्यसपछि भोल्टेच बढाउनको लागी थप क्षमता भएका ट्रान्र्फमहरु राखिएको छ । जस्ले गर्दा अहिले चाहि विद्युत्को समस्या वडामा छैन ।
७, सञ्चार क्षेत्रमा
गढवा गाउँपालिकाको हकमा लेनलाइन फोन सेवाको विस्तारको लागी सञ्चार मन्त्रालयमा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादको नेतृत्वमा डेलिगेशनको लागी पनि पुगेका थियो हामी । केही वडाहरुमा त्यसको पहुँच नपुगेको अवस्था छ । हामीका चाहि अहिले लेनलाइन फोनको व्यवस्था नभएतापनि अन्य मोबाइलन नेटवर्कको टावरहरुमा नेपाल टेलिकम र प्रभाइभेट एन.सि.एलको जडान गरिसकेका छौँ र संगसंगै हामीसंग उद्योग कलकारखाना भएको हुनाले पनि नेटको सुविधा गाउँ ठाउँमा छ । अहिले चाहि जनताहरु घर–घरमा नेट जडान गर्ने र मेरो चुनावमा अर्को एउटा सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नेछु भनेको थिए । अहिले मेरो ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । किन भने यो भन्दा अगाडि आवश्यक पुर्वाधारहरु मैले पुरा गर्दै आइरहेको थिए । यो निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्थालाई अलि पछिनै राखेको थिए । अव केही स्थानहरुमा निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने मेरो आफ्नै लक्ष्य रहेको छ ।
८, यातायात क्षेत्रमा
यातायात क्षेत्रमा भन्ने हो भने, विकासको मुल पूर्वाधार अथवा मेरुडण्डै यातायातलाई मान्नुपर्छ बास्तमा । जहाँ यातायताको पहुँच हुदैन, जहाँ सडक बाटाघाछटा पुग्दैन त्यहाँ विकासको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । यसको लागी गढवा गाउँपालिकाले पनि आफ्नै किसिमको अपधारण बनाएर आइरहेको छ भने हामी वडाले पनि कुल टोलमा कसरी चाहि बाटोको पहुँच विस्तार गर्ने भने प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोज गर्दे आएका छाँै । अहिले धेरुे बाटाघाटा नभएका धेरै टोलहरुमा नयाँ ट्र¥याक खुलेका छन् । यद्यपी त्यहाँ दर्ता श्रष्ता भएका जग्गाहरु पनि त्यहाँका किसान दाजुभाइले छोड्दिनु भएको छ ।
हामीले गाउँपालिकाको मापडण्ड अनुसार आठ मटिर र दश मिटर फरारकिला नयाँ ट्र¥याक खुलेका छन् । धोद्रे, रसिंह, जुरौनी, चिसापानी, मलमला, पत्रिङ्गा, जेठाजगाया लगायतका यस्का उदाहरण छन् । जनताहरुको माग अनुसार वडा वडामा नयाँ नयाँ ट्र¥याक खुलेका छन् भने केही ठाउँमा तत्कालै पक्की नाला सहितको कालोपत्रे हुदैछ । यस आर्थिक वर्षमा जुरौनीमा ५६ लाखमा सात सय मिटर बाटो कालोपत्रे हुदैछ ।
यस्तै वनबारीमा तिलिाखको लागतमा बाटो कालोपत्रे हुदैछ, यसैगरी महेन्द्र राजमार्गबाट जनता मा.विको प्राङ्गणमा बाटो कालोपत्रे हुदैँछ र गोबरडिहा स्वास्थ्य चौकी अगाडि पनि बाटो कालोपत्र हुदैँछ । सबै गरेर एक नम्बर वडामा चार स्थानमा सडक कालोपत्रे हुदैछ । त्यसैगरी शहरी डिभिजन कार्यालय घोराहीबाट पनि जुरौनी, चिसापानी, धानखोला जोड्ने जुन कृषि सडक भन्छ, बाह्र मिटर सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । एक अर्का गाउँ जोड्नको लागी विभिन्न ट्रस् पुल बनेको छ । यसैगरी कालाकाटे गढवा सडक बनिरहेको छ । एक नम्बर वडा अन्तरगत हुलाकी राजमार्ग बनबारी कल्याणकोट हुदैँ कपिलबस्तुको विजयनगर गाउँपालिका जोड्ने भनेर त्यसको डि.पि.आर. र नक्साङकन भइ टेण्डर प्रकृया अगाडि बढेको छ ।
९, जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई यहाँले कसरी नियाल्नु भएको छ ?
यहाँले निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँ नीर । हामी निम्न स्तरका गरिबिको रेखामुनी रहेका नागरिक हौँ । यसमा पनि पेशाले कृषिमा अवद्ध छाँै । अझ एक नम्बर वडामा उद्योग कलकारखान बढि भएको हुनाले यहाँ जनताले ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरु यहाँ छन् । त्यसकारण उनिहरुको आधारभुत आवश्यकता भनेको खास, बास र कपासकै कुरा हो, त्यैसले मेरो आफ्नो भिजन के हो भने उनिहरुको जिवन समृद्धिको लागी भने आर्थिक कृयाकलापहरु लागु हुन सकने कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ । जिवीकोपार्जनमा उहाँहरुलाई संलग्न गराउनुका साथै अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । स्थानिय स्तरमा भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर उहाँहरुको क्षमताको आधारमा उहाँहरुलाई अर्थउपार्जन गरेर भौतीक आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
१०, निर्वार्चित भएर स्थानिय तहमा आइसकेपछि काम गर्ने क्रममा चुनौती आएकी आएनन्, बताइदिनुस्न ?
यो पन निकै महत्वपूर्ण प्रश्न गनु भयो यहाँले । हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानिय तहमा आइसकेपछि विकासका कामलाई तिब्रता दियौँ । विकासको क्रममा विनाश अवश्य हुन्छ । सोही क्रममा विकास गर्दा विरोधका स्वरहरु धेरै आए तर विरोध गर्ने प्रतिपक्षले नै हो । उनिहरुले राम्रो काम गरेको देख्न सक्दैनन् । मैले मेरो अहिले सम्मको कार्यकालमा विकास गर्ने क्रममा विरोधका जती पनि आवाजहरु आए ति आवाजलाई चिरेर विकास गर्न तर्फलागे । विकास गर्ने क्रममा विरोध आउने सोभाविक हो । विरोध आयोभ भन्दैमा विकास रोक्ने होइन । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो विचारमा ।
११, अन्तमा केही छुट्यो की ?
सर्वप्रथम यहाँ र तुलसिपुरखबर अनलाइन डटकमलाई विशेष धकन्यवाद दिन चाहान्छु । दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का गतिविधिहरु सञ्चारमाध्यमबाट आम स्थानियहरुको माझमा पु¥याइदिनु भएकोमा । अन्य दिनहरुमा पनि यहाँहरुको सहकार्य यसरीनै रहनेछ भन्ने अपेक्षा समेत गरेको छु ।
बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरेर नमुना काम गरे : अध्यक्ष लामीछाने
तुलसीपुरमा नगर स्तरिय १२ वटा योजना सम्झौता
चन्द्रगन्ज– राईखल्यान सडकको निर्माण कार्य सुरु